Daawo: Wafdigii galmudug uga qeyb gali lahaa wada hadallada ahlu-sunna oo cadaad dib ugu laabtay | Kismaayo24 News Agency
Daawo: Wafdigii galmudug uga qeyb gali lahaa wada hadallada ahlu-sunna oo cadaad dib ugu laabtay
Sunday April 30, 2017 - 2:59 under Somali News by Tifaftiraha K24
Magaalada cadaado ee xarunta KMG maamulka galmudug waxaa maanta dib ugu laabtay wafdi uu hogaaminaayo madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug maxamad xaashi carabey.
Wafdigaan oo dhawaanahaanba ku sugnaay magaalada muqdisho ayaa waxaa halkaasi ay u joogeen ka qeyb galka wada hadallo la filaayay in ay dhexmaraan ahlu-sunna iyo galmudug oo markii dambe fashil kusoo dhamaaday qabsoomiddiisa.
Madaxweyne ku xigeenka waxaa socdaalkiisa soo laabashada cadaado ku wehlinaayay afarkiisa waxaa ku wehliyey gudoomiye ku xigeenka Barlamaanka Galmudug Xareed Cali Xareed, iyo masuuliyiin kale.
Garoonka diyaaraddaha magaalada cadaado ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay wafdiga waxaana soo dhaweyn kadib warbaahinta la hadlay madaxweyne ku xigeenka galmudug maxamad xaashi carabey isagoona ka warbixiyay howlihii muqdisho ay waayadaan u joogeen iyo waxa uga qabsoomay.
Xaashi carabey wuxuu sheegay in galmudug ay markasto diyaar u tahay wada hadallo ay la galeyso maamulka gobollada dhexe ee ahlu-sunna isagoona intaa raaciyay in wada hadallada ay dib u furmi doonan marka doorashada madaxweynaha galmudug ay soo dhamaato.